Diniho ny tetikasan'ny Reactotron | Avy amin'ny Linux
Diniho ny tetik'asa React misy anao amin'ny Reactotron
Luigys toro | | fandaharana
Hevero ny natiora ho an'ny anjarany dia rafitra mamela izany mamorona rindranasa zanatany ho an'ny tranonkala, iphone ary android amin'ny alàlan'ny React, izay misy fampidirana amin'ny rafitra toa ny Angular, Ember, Backbone ankoatry ny hafa.
Ireo mpandraharaha mampiasa React.js sy React Native dia mahavita mamorona Interfaces mavitrika, miaraka amin'ny fampisehoana avo lenta, endrika madio sy manavao, miaraka amin'ny fitantanana data angona. Reactotron Amin'ny lafiny iray, izy io dia rindrambaiko iray ahafahantsika mijery ireo rindranasa ataonay amin'ireto haitao ireto avy amin'ny Linux, manampy amin'ny debug, mitsapa ary manamarina ny fiasan'izy ireo.
1 Inona no atao hoe Reactotron?
Inona no atao hoe Reactotron?
Izy io dia rindrambaiko misokatra malalaka, novolavolain'ny studio Mena tsy manam-petra, izay ahafahantsika mijery ireo rindranasa novolavolaina niaraka tamin'ny React JS sy React Native, ny fitaovana dia cross-platform (Linux, Windows ary MacOS) ary manana vondrom-piarahamonina tena tsara izay manome fanatsarana vaovao isan'andro.
Reactotron dia tafiditra ao anaty fampiharana ho fiankinan-doha amin'ny fampandrosoana, izay mivadika ho fiantraikany 0 amin'ny fotoana fanangonana, raha vantany vao tafiditra isika dia afaka manala ny fampiharana antsika amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fisehoan-javatra tena tsara izay miaraka amina fampiasa maro.
Anisan'ireo lafin-javatra marobe an'ny Reactotron azontsika asongadina:
Fampidirana mora amin'ireo rindranasa novolavolaina tamin'ny React.js sy React Native.
Tsy manampy na inona na inona amin'ny fizotran'ny fampiharana.
Jereo ny satan'ny rindranasa rehetra.
Mampiseho ny fangatahana sy ny valiny API.
Afaka manao fitsapana fampisehoana haingana ianao
Azonao atao ny mamakafaka ny satan'ireo singa na ampahan'ny fampiharana.
Mampiseho hafatra mitovy amin'ny console.log
Izy io dia manana fivoarana avo lenta hanarahana ny lesoka eran'izao tontolo izao.
Manova ny toetran'ny fampiharana anao amin'ny alàlan'ny Redux na mobx-state-tree
Avelao haneho ny sarona sary amin'ny React Native
Ahafahanao mandinika fitehirizana tsy misy ifandraisany amin'ny React Native.
Advanced Event Timeline, izay ahafahanao manara-maso ny hetsika rehefa mitranga izany.
Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny olan'ny singa sasantsasany ary mahita ny toetrany nohavaozina rehefa mampiasa ny fampiharana ianao, tsy isalasalana fa fampiasa tena tsara hanandramana ny fiantraikan'ny bibikely na ny fitadiavana mitovy aminy.
Izy io dia manana torolàlana fametrahana tsotra sy haingana izay azo jerena Eto, izay ahafahantsika manomboka mampiasa Reactotron ao anatin'ny minitra vitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fandaharana » Diniho ny tetik'asa React misy anao amin'ny Reactotron
Google Summer of Code, mandray anjara amin'ny tetikasa manerantany